Bestdị egwuregwu ụmụaka kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Manuel Ramirez | 05/04/2021 20:00 | Egwuregwu gam akporo
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-atụ ụjọ ịnwe echiche dị egwu ma wepụta ya na egwuregwu na-enweghị mmefu ego iji mefuo maka mgbasa ozi na ịzụ ahịa, yabụ, ebe a na-edegharị ya n'ọtụtụ clones, ị nwere ike iru ndị na-ege ntị na-enye gị nku ezu iji bụrụ Fall Guys ma ọ bụ Stardew Valley.
Ka anyị soro kacha mma Fall Guys egwuregwu n'ihi na gam akporo nakwa na n’ime ọnwa ole na ole, kemgbe oge ọkọchị, ha apụtawo dịka ahịhịa na-ekpuchi ntọala nke egwuregwu a nke enwetara site n’ọmụmụ na-elekọta ya mmepe site na Epic Games otu izu gara aga. Gaa maka ya.
1 Egwuregwu Agha
4 Daa ada
5 Fluffy Fall: Mee ngwa ngwa ma zere ihe ize ndụ!
6 Zọ ndị dara ogbi iji nwụọ: Ndị dike
7 Hex Kpakpando
8 Ikuku ikuku
10 Gbaa Guys: Knockout Royale
11 Party Royale: Adaala!
12 Soda ysmụ okorobịa
13 Mụaka Fall: Ultimate Race Tournament Multiplayer
Y ka anyị na-eche ka Fall Guys bịarute na gam akporo n'oge ụfọdụDị ka ọ na-na-mepụtara, anyị na-aga na nke a, mbụ na ndepụta nke Fall Guys ụdị egwuregwu. N'ebe a, anyị banyere igwu egwu na ndị egwuregwu 32 na nnukwu map ma ọ bụ ebe egwuregwu nwere ọtụtụ ngwa agha na ngwa agha iji chebe onwe anyị n'aka ndị ọzọ. Nke kachasị mma, nke ọ bụla egwuregwu na-ewe nkeji ole na ole. Ọnọdụ isometric maka nso nso Royale karịa Fall Guys, mana nke bụ n'efu.
Ọ bụrụ na dị ka Fall Guys ma na-enyekwa ọtụtụ mmadụ nke mere na ị nwere ike ịnwe ezigbo oge na oge ndị ahụ na-atọ ọchị nke ụdị egwuregwu a na-enyekarị. Karịsịa n'ihi physics na otu ndị ahụ Yellow Humor na-anwale (na ihe nkiri TV 90 na Tele 5) na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ na-enye anyị usoro egwuregwu atọ: ịma aka, ọnọdụ iti mkpu na ọnọdụ megide ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịga n'ihu ihu nnukwu ikpo egwuregwu.
Ya mere ị nwere ike pụta ìhè Noodleman.io bụ maka ike ya inye ọtụtụ mmadụ ma na obodo na ntanetị, ya mere o nwere ike ịbụ a zuru okè egwuregwu n'ihi na abụọ mobiles mgbe anyị nọ n'ụlọ. O nwekwara ihe omuma nke physics na agwa nzuzu dika egwuregwu ndi Epic Games zutara ugbu a. O nwedịrị ụfọdụ chinchi nke na-enye anyị ohere ịchị ọchị ọbụna n'oge ụfọdụ, dịka ụfọdụ ndị egwuregwu na-ekwu. Free dị ka ọtụtụ n'ime egwuregwu na ndepụta a.
Noodleman.io - Egwuregwu Ndị Ọzọ
Lee anyị tinye egwuregwu 39-player nke anyi aghaghi iburu uzo ma hapu ndi ozo site na agba oso mmeri. Ha akwụsịghị iji Fall mata onwe ha, ọ bụkwa n'ihi ọchịchọ inwe ike igwu egwuregwu dị ka Fall Guys, ndepụta clones a anaghị akwụsị iji dọta uche. Anyị na-ekwukwa banyere egwuregwu nke ruru iri ma ọ bụ ọtụtụ narị puku nyocha. O nweela ọtụtụ egwuregwu dịka otu n'ime mmelite ndị bịara n'oge na-adịghị anya karịa mgbe a tọhapụrụ ya, yabụ ọ nweghị ihe ọ bụla.
Fall Dudes (Oge mbata)
Developer: Ulọ ọrụ PepUp
Fluffy Fall: Mee ngwa ngwa ma zere ihe ize ndụ!
Ma ugbu a anyị na-aga otu n'ime ndị nwere ihe karịrị nyocha 100.000, ma nke ahụ dị anya site na ọtụtụ egwuregwu iji bụrụ otu ọkpụkpọ Fall Guys ụdị egwuregwu. N'ezie, ị ga - ezere ọtụtụ ihe mgbochi ka onye ọhụụ nwere ike ịpụ aka na ọkwa ndị a nke ọma ka ọ sie ike imeri ha. Egwuregwu maka afọ niile ị na-agaghị echefu, ọ bụ ezie na ị ga-atụ uche ọtụtụ ndị egwuregwu na ndị nzuzu ndị ahụ na physics.
Developer: Ihe (egwuregwu)
Zọ ndị dara ogbi iji nwụọ: Ndị dike
Anyị ga-ewere ọtụtụ egwuregwu ọzọ maka egwuregwu dị larịị nke anyị ji eji dike na ihe ọchị na nke ahụ anyị ga-eche ihu megide AI ma ọ bụ ọgụgụ isi nke egwuregwu. Nke ahụ bụ, anyị ga-ezere ihe mgbochi, wụpụ ma kwaga n'otu oge ka ndị ọrụ dị iche iche nke ọkwa ọ bụla wee ghara ịkụda anyị. Kedu nke ọ bụla, a na-eme nke ọ bụla nke ọma ka ị mụọ usoro ọ bụla ma si otú a gaa nyocha dabere na njehie. Free na ọ bụ ezie na ọ nweghị ọtụtụ nbudata dị ka ndị ọzọ, ọ bụ egwuregwu echekwara nke ọma na ọkwa niile.
Developer: Metro insgbọ oloko Melbourne
Onye ọzọ nke Fall Guys ụmụ nwoke nke Ee anyị nwere ọtụtụ ndị na ntanetị ma nke ahụ bụ oke osimiri nke ọchị, ebe ọ bụ na anyị nwere ndị egwuregwu niile na-amapụ site na ebe a gaa ebe ahụ na-anwa ịdaba na mpaghara hexagonal nke ga-eme ka ha dịrị ndụ mgbe ndị ọzọ na-efunahụ ha. Nwere ike ịmeghe skins ma nwee obi ụtọ na egwuregwu na-enweghị ọtụtụ nbudata na nyocha, mana mgbe ị nwara ya, ị ga-enwerịrị egwuregwu dị mma.
Developer: Ebighị Ebi Studio
Anyị na-akpafu ntakịrị site na egwuregwu yiri nke a na ọtụtụ egwuregwu, ma ọ nwere echiche na-adọrọ mmasị na ndị esometric eserese ndị ahụ ga-elekwasị anya na tube nke agwa anyị si aga. Anyị ga-erite uru nke nrịgo na ala iji gbalịa imecha tupu AI anyị echee ihu. Egwuregwu nke ọtụtụ agba na nke ahụ na-edezi ọmarịcha ihe ndị ahụ e kwuru na mbụ. Ọ na-elekwasịkwa anya na nche anwụ nke ga-enyere anyị aka iji ifufe na-aga ngwa ngwa. Egwuregwu na-enweghị egwuregwu na-enweghị ọtụtụ nyocha, mana na anyị nwere ike ikwu site na usoro ndị a na Androidsis.
Developer: Egwuregwu Kwesịrị Ekwesị Studios
O dozighikwa anyị anya ma ọ bụrụ na anyị ga-egwu megide ndị egwuregwu ma ọ bụ bọọlụ, ma anyị na-eche ihu egwuregwu ọzọ cloned nke protagonist nke ndepụta a. Ọ dị ntakịrị akara akara na nbudata nke ndị ọzọ, mana anyị nwere ike itinye ya na orbit nke Fall Guys. Agba na ọkwa dị iche iche maka anụrị anyị.
Gbaa Guys: Knockout Royale
Dị ezigbo mma na eserese ma nwee nnukwu ụdị, ntọala nwere nnukwu mmepe yana ọtụtụ egwuregwu na - eme ka ọ bụrụ otu n'ime egwuregwu kachasị egwu na ndepụta a. Anyị enweghị ike ịhapụ onye a Fall Guys dị ka ọ so n’etiti ndị kacha mma. Ihe nkwarụ kasịnụ bụ na asynchronized egwuregwu ndị ahụ, nke pụtara na ị na-egwu "onyinyo" ma ọ bụ "mọ" nke ndị egwuregwu ndị ọzọ. Echere m, ha kpọrọ aha ya ma ọ dị ka ọ bụ onye egwuregwu, mana ọ bụ bot. N’ọnọdụ ọ bụla, ọ pụtaghị na anyị nwere mmetụta nke iso ndị ọzọ na-egwu.
Party Royale: Adaala!
N'ebe a, anyị nwere ọtụtụ egwuregwu na ezigbo oge iji chee ihu ọchị ndị ọzọ na-abụ ezigbo egwuregwu. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee akara ngosi dị oke ọnụ na ihe karịrị nyocha 40.000. Ee ọ bụ eziokwu na a ga - azụta akpụkpọ, ọ ga - akwụrịrị ụgwọ iji merie ụfọdụ maka ụfọdụ, mana n'ozuzu ọ bụ ihe na - atọ ụtọ dịka egwuregwu ọzọ kachasị mma na listi iji maa aka ma chịa ọchị na - enweghị nkwụsị
Developer: Na-egwu egwu
Soda ysmụ okorobịa
Ee n'ezie Soda Guys dọrọ aka na ntị na peeji nke Google Play yiri Fall Guys, ọ bụ maka ihe. Ma ọ bụ na ha maara nke ọma na ha depụtaghachiri ụzọ dị egwu nke egwuregwu ahụ, n'agbanyeghị na akụ ma ọ bụ akụ ha bụ nke ha. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ihe yiri nke ahụ Epic Games zụtara, egbula oge iji nwalee ya na physics, ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na ọkwa ndị ahụ ga-etinye anyị n'ule ahụ. Ọ bụ ezie na ọ ka bụ ihe omimi ma ọ bụrụ na anyị na-egwu egwuregwu megide bots ma ọ bụ ndị egwuregwu na oge ...
Soda Guys (nnweta oge)
Mụaka Fall: Ultimate Race Tournament Multiplayer
Site na egwuregwu nke ndị egwuregwu 30 anyị na-aga ozugbo na multiplayer n'ịntanetị na 12 dị iche iche egwuregwu ụdịdị na 51 dị iche iche na-agụ akụkọ na ị nwere ike unlock kpọghee ekwt. O nwere ike ịbụ otu n'ime akwụkwọ kachasị adọrọ mmasị na ndepụta Fall Guys niile, ọkachasị ebe ọ naghị eri ihe dị ukwuu iji jide ọdịnaya ahụ kpọghee yana n'ihi na o nwere ọtụtụ odide. Anyị gafere karịa nyocha 4.000 ka ha bụrụ ndị ọzọ na-egwuri egwu na na ha na-etinye n'ụzọ dị mma na Storelọ Ahịa Play. Ihe odide ahụ nwere ike ọ gaghị abụ nke ọma emebere dịka ị nwere ike ịtụ anya, mana na ọ bụ egwuregwu dị mma ịsọpụrụ ndị ọzọ.
Anyị tinye egwuregwu a na ndepụta n'ihi na ha anaghị eji otu aha, ọ bụ ezie na ha na-eji "Fur" si "Furries" nke mere na anyị nwere ụfọdụ anụ ụlọ na ha bụ anu ulo ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ nwere ọtụtụ ndị na-eme ihe n'ịntanetị, eserese dị mma dị mma, nka na ụzụ na obere ihe na-egbochi ma ọ bụ mebie ahụmịhe egwuregwu. Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị mfe dịka ndị ọzọ, mana ọ na - enweta gị karịa karịa ka ị bụrụ egwuregwu ọzọ Fall Guys nke anyị nwere na mkpanaka gam akporo anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu ysmụ okorobịa kachasị mma maka gam akporo